ချစ်သူဖြစ်သူ ရီရီကိုလက်ထပ် လက်စွပ်အကောင်းစားကြီးနဲ့ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် – Cele Top Stars
ချစ်သူဖြစ်သူ ရီရီကိုလက်ထပ် လက်စွပ်အကောင်းစားကြီးနဲ့ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
November 21, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ…..မင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ မောင်လေးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင် ကို ပရိသတ်တွေလည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူဟာ တစ်ချိန်က ‘မောင်’ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူပါ။ အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင် ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်….။
စိန်ဖြိုးလှိုင် ဟာ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်လေ့ရှိတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့Masterဘွဲ့တစ်ခုကိုပါ လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူ တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ပျော်စရာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှပေးလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိသတ်များက ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်….။
ပျော်စရာလေးတွေကိုလည်း အတူတကွလုပ်တတ်ကြသလို အလှူအတန်းမှာဆိုရင်လည်း နှစ်ယောက်သားက တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။မကြာခင်မှာလည်း ချစ်သူလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွီဗီဒီယိုတွေ တင်လေ့ရှိတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် တို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ အခုမှာလည်း ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု Tik Tok မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူလေးကို ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် အဂေါ်ဆုံး လက်ထပ်လက်စွပ်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ဖြိုးလှိုင် ကတော့မုန့်တစ်ခုကို လက်စွပ်လို သဘောထားပြီး စနောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ ရီရီ ကတော့ အရမ်းကိုသဘောကျနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း စိန်ဖြိုးလှိုင်တို့ရဲ့ အမိုက်စားလက်ထပ်လက်စွပ်လေးကို ကြည့်ပြီး ထပ်တူကြည်နူးနိုင်ကြပါစေနော်….
Source: Sein Phyo Hlaing & Yi Yi
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ…..မငျးသမီးခြော နန်ဒာလှိုငျရဲ့ မောငျလေးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာစိနျဖွိုးလှိုငျ ကို ပရိသတျတှလေညျးသိကွမယျထငျပါတယျနျော။ သူဟာ တဈခြိနျက ‘မောငျ’ ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသားတဈယောကျအနနေဲ့ရပျတညျခဲ့တာဖွဈပွီ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့သူပါ။ အခုခြိနျမှာဆိုရငျတော့ဒေါကျတာစိနျဖွိုးလှိုငျ ဟာအနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားလိုကျပွီဖွဈပွီး ဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ….။
စိနျဖွိုးလှိုငျ ဟာ သူ့ရဲ့ရပျတညျခကျြနဲ့ပကျသကျပွီး ပွတျပွတျသားသားလုပျလရှေိ့တဲ့သူတဈဦးဖွဈတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေမှောဆိုရငျလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနပေါဝငျနတေဲ့သူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့Masterဘှဲ့တဈခုကိုပါ လကျလှတျခဲ့တဲ့သူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ စိနျဖွိုးလှိုငျနဲ့ ရီရီပှငျ့ဖွူ တို့ခဈြသူနှဈဦးကတော့ စိတျတူကိုယျတူနဲ့ ပြျောစရာလေးတှကေို ပရိသတျတှကေို ဝမြှေပေးလရှေိ့တာကွောငျ့ ပရိသတျမြားက ခဈြခငျအားပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ….။
ပြျောစရာလေးတှကေိုလညျး အတူတကှလုပျတတျကွသလို အလှူအတနျးမှာဆိုရငျလညျး နှဈယောကျသားက တိုငျတိုငျပငျပငျနဲ့ လုပျလရှေိ့ကွပါတယျ။မကွာခငျမှာလညျး ခဈြသူလေးနဲ့လကျထပျဖို့အတှကျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခှီဗီဒီယိုတှေ တငျလရှေိ့တဲ့ စိနျဖွိုးလှိုငျ တို့ခဈြသူနှဈဦးကတော့ အခုမှာလညျး ဗီဒီယိုလေးတဈခု Tik Tok မှာ တငျပေးလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော…
ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ခဈြသူလေးကို ဘယျသူနဲ့မှမတူအောငျ အဂျေါဆုံး လကျထပျလကျစှပျဝယျပေးခဲ့တဲ့ စိနျဖွိုးလှိုငျရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိနျဖွိုးလှိုငျ ကတော့မုနျ့တဈခုကို လကျစှပျလို သဘောထားပွီး စနောကျခဲ့တာ ဖွဈပမေဲ့ ရီရီ ကတော့ အရမျးကိုသဘောကနြတော ဖွဈပါတယျနျော… ပရိသတျကွီးလညျး စိနျဖွိုးလှိုငျတို့ရဲ့ အမိုကျစားလကျထပျလကျစှပျလေးကို ကွညျ့ပွီး ထပျတူကွညျနူးနိုငျကွပါစနေျော….
တကယ်ကိုရိုးသားသူရဲ့ကောင်မလေးကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုလာတဲ့သူတွေကြောင့် ဒေါသထွက်စိတ်တိုနေတဲ့ စည်သူမောင်
မိဘဆီမှအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ခံရတဲ့အပြင် ဇနီးသည်ကပါထပ်မံ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ သတင်းကြေငြာသူ ကျော်သက်လင်း